ကျွန်တော့်အိမ်: ဘန်းကျော်မြို့မှ ကျွန်တော်လွမ်းသော ....
ရေးသားသူ Tea at 9:20 AM
တီးရယ်၊ ဒီမှာ ဗိုက်ဆာနေပါတယ်ဆိုနေမှနော် စိတ်ပိန်အောင်လာပြောနေပြီ၊ နင့် လစ့်ထဲကနာစားချင်တာတွေအများကြီး ပဲဟာ၊
စိတ်တိုသွားပြီ။ ဗိုက်ဆာတယ်၊ နာလဲခေါက်ဆွဲပြုတ်သွားစားပြီ။
ကောင်းတယ်ဗျာ။ အစားအသောက် လင့်ခ်နေရာ လေးတွေ၊ ဆိုင် နေရာ ပုံလေးတွေပါနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ဗျား။ သီးသန့် ပေ့ခ်ျတစ်ခုလုပ်ထားပါလား။ နယ်က ရန်ကုန်ကို အကြာကြီးနေမှ တစ်ခေါက်ရောက်တဲ့ ကျွန်တော့်လို ယောင်တောင်ပေါင်တောင် တွေအတွက် အကျိုးရှိတာပေါ့။
Can u cook san pyout?
hehe. I didn't know that.
You ahveavery good list to eat.
ကို wanderfish ရေ။ အစ်ကို့ ဆိုဒ်ကို လာပြီး ပြောမလို့ Cbox ရှာတာ တော်တော်ရှာလိုက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် မတွေ့လိုက်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ဘဲ ကန်းနေလို့လားမသိဘူး..
ဖြစ်နိုင်ရင်ဆိုင်ပုံတွေပါတင်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က စန်ဖရန်မှာ.. အခု ရန်ကုန်ကို လှမ်းပြီး ပြောထားတာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ခက်တယ်။ အစားအစာ ပုံတွေက ပို အရေးကြီးပါတယ်။ :D ရန်ကုန်မှာ ဆိုရင်တော့ ကားလေးတစ်စီးနဲ့ လျှောက်မောင်းပြီး ချက်ချင်း တင်ပေးလို့ရတယ်။ :D
အမယ်လေး ကြောက်ချာကြီး ....အစားပုတ်လိုက်တာ........:D
ကျွန်တော်လည်း ၀ရာက ပိန်လာတာ :P
@eitar ဟုတ်တယ်..တီးကတော့ အစား ပုတ်ပုတ်ပဲ။
@soe htet ဒါဆိုရင်တော့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြဆို့။
@cat cat ဘယ်သူတုန်း.. ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုသိတုန်း။
ဟီးဟီး - ဓာတ်ပုံတွေရရင် အမြန်တင်ပေးပါ။ ဒီမှာငတ်နေတာကြာပါပြီ။ အဲ့ဒါတွ လည်းဒီမှာ တခုမှမရပါဘူး။ ပြောတော့ဖူး။ ၀မ်းနဲတယ်။
ကို လက်ဖက်ရည်ရေ။ အရေးတယူဖြေကြားပေးတဲ့ အတွက် appreciate ပါ။ ကျွန်တော့်ဆိုက်မှာ စီဘော့က်မထားလို့ ဆောရီးပါဗျာ။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပေါ့ဗျာ။ အင်း တကယ်တော့ အစားအသောက်ကောင်းကောင်းတွေ (နေရာကောင်းကောင်းတွေ) သိတဲ့လူတွေကလဲ resource power တစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်က ယိုးဒယားမှာ အနေများတော့ တစ်နေရာ သွားချင်တယ်ဆိုရင် အခုလို ညွန်းထားတဲ့ (ကြော်ညာမဟုတ်တဲ့) နေရာမှာ ရှာတာ ပိုပြီးထိရောက်တယ်လေ။ မြန်မာပြည်မှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပိုပြီး အဆင်ပြေလာရင်တော့ မြန်မာပြည်အနှံ့ ကိုယ်ပိုင်ကားလေး၊ ရင်းနှီးတဲ့ ဘော်ဒါတွေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ခရီးရှည်ထွက်ဖို့ အိပ်မက်ရှိပါတယ်။
ဘာလို့ Cbox မထားရတာလဲ.. တစ်ခုလောက်ရှိတော့ ပို အဆင်ပြေမလားလို့..တော်ပါ။ မစပ်စုတော့ဘူး။။ ဆော်တီး။
ယိုးဒယားဆိုလို့ ယိုးဒယားမှာလည်း တီးစားချင်တာတွေ အများကြီးရှိပါ့။ ဆိုင်နာမည်တွေတော့ မေ့သွားပြီ။
၁၈၀ ကနေ ၁၂၆ အထိ ဗျ ... အသက် ၂၃ တုံးက ... အခု ၃၃ မှာ ၁၆၀ ပြန်ဖြစ်နေတယ် ... ကျွန်တော်က လျှော့ချင်တယ် ချစ်သူက ခွင့်မပြုလို့ ... အရပ်က ၅ ပေ ၈ လက္မ ... :P
omg.. i thought i am greatest.. and u are better!! gosh!!
within what peirod?? :D
mine is one month.. lol
my height is 5'7'.
wanna kill u after i read this list
don't worry carzycat. u will have chances to eat these. :D
ba gyii tee
and it is not washable in washing machine or microwavable @.@
i am getting angry when you post those food as i can't find evenasingle food from Myanmar here. How poor am I?I missssssssssss Myanmar food especially ကုန်းထက် ကြက်ဆီထမင်း and Eugenia's ကြေးအိုး....
ရေးထားတာတွေ နဲ့တင် ဘယ်လောက် အစားပုတ်တဲ့ သူဖြစ်မလဲ ဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ ရတယ်.. တွေ့ရင် မခေါ်ကြေးနော် ကျွေးနေရမှာ စိုးလို့ ဟိဟိ
ပြန်တော့မှ အ၀တီးမယ်...... ပြန်ခါနီးနေပီ
အဲ့အချိန်ကျရင် ပုံရိုက်ပေးခဲ့မယ်နော် ......
မော်ဒန် လက္ဘရည်ဆိုင်က ကျစိမ့်လေး တစ်ခွက်လောက်ပါရင် ပိုများကောင်းသွားမလားလို့ :)
tea ပြောတာတွေ တော်တော်များများ မစားဖူးသေးဘူး..ပြန်ရောက်မှ အ၀ကစ်ရမယ်...အခုတော့ သွားမစားဘူးသေးတဲ့နေရာလေးတွေ တေးသွားတယ်ဗျို့ 
တော်ပီ။ မပြောနဲ့တော့။ ဒီမှာက မြန်မာပြည်ကို နောက် ၄ နှစ် ၅ နှစ် အတွင်း ပြန်ဖြစ်မှာ မဟုတ်သေးဘူး.. စိတ်ညစ်ပါတယ်.. :(
အစားကြီးတာတွေ တူနေပြီး များလိုက်တာဗျာ ကျနော်တော့ အဲ့လောက်မစားဖူးဘူးး မုန့် ဟင်းခါးဆိုတဲ့နေရာလည်းရောက် ပါစပ်ထဲက သွားရည်တွေ ပြန်မြိုချလိုက်ရတယ်း)
sabine sabine မှ သဘောင်္သီးသုပ် နှင့်ယိုးဒယားအစာများ
ကျောက်မြောင်း နိယောဓလမ်းမှ ပုစွန်ခွက်ကြော်သုတ်
တိုကျို မှ ကြက်ကြော်
ထွက်လာတာကြာတော့ တချို့ ဆိုင်နာမည်တွေမေ့ကုန်ပီ။
Ko Tea yayyy...wanna ask u sumthin...did u also skip dinner or did some dieting like eat less in every meals or avoided sweet and oil or only ate vegetables and fruits in that one month ???
pls answer my questo par naww...
thanka..lookn forwardn from u
I didn't skip any dinner. of cuz i only ate vegetables and fruits. No sweet! No Oil!
ရှိသမျှလစာရော စုထားသမျှ အတိုအစလေးတွေရော
ဘယ်GYM မှာဆော့လဲဟင်.. ဗိုက်ကျအောင်ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းကို အများဆုံးလုပ်လဲဟင်.. ပြည့်ပြည့်ဆုံဆုံလေးဖြေပေးပါလားဟင် ဒီမှာတော်တော် ဒုက္ခရောက်နေလို့ပါ.. Pls..
၁၂ လမ်းအောက်လမ်းကဦးချစ်Tea နဲ့ မောင်မြင့်ထမင်းဆိုင်က ၀က်အူကြော်ကျန်သေးတယ်..
တော်ပြီ သားရည်တွေkeyboard ပေါ်ကျကုန်ပြီ..ပြန်ရောက်လို့ကတော့စားပိုးနင့်အောင်စားဖြစ်မယ်..အစားအတွက်အသက်ပင်သေသေ..
ကောင်းကောင်း က မာလာဟင်းလဲ စားချင်တယ်ဗျာ...
တခုခု ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ဘိုက်စာလိုက်တာ ရေးထားတာတွေကလည်း စားချင်စရာကြီးပါလား